Magaalo kastaa waxay leedahay farshaxan u gaar ah oo dadweyne, iyo farshaxanno magaalo ku yaal dhismayaal camiran, caws madhan iyo jardiinooyin waddooyin ah, waxay ku siinayaan muuqaalka magaalooyinka habeyn iyo isu dheelitirnaan dad badan. Ma ogtahay in 20-taalo-magaalo laga yaabo inay waxtar leeyihiin haddii aad mustaqbalka ururiso. Sawirada “Pow ...
Mashruuca Azerbaijan waxaa ku jira taallada maarta ah ee Madaxweynaha iyo Xaaska Madaxweynaha.
Mashruuca Dowladda Saudi Arabia
Mashruuca Dowladda Sacuudi Carabiya wuxuu ka kooban yahay laba farshaxan oo naxaas ah, kuwaas oo kala ah rilievo weyn oo laba jibbaaran (50 mitir dheer) iyo Dunes Sandes (20 mitir dheer). Hadda waxay taaganyihiin Riyadh waxayna muujinayaan sharafta dowladnimo iyo mideynta maskaxda dadka Sacuudiga.
Waxaan dhoofiney hal taxane oo ah naxaas farshaxan ah Boqortooyada Ingiriiska sanadkii 2008, taas oo loo qaabeeyey hareeraha waxyaabaha ay ka kooban yihiin kabo faras lagu xidhayo, dhalaalida, alaabada-iibsiga iyo fardaha koofurta ee boqortooyada. Mashruucan waxaa lagu rakibay fagaaraha Britain oo wali adduunka ayuu muujiyaa soojiidashadiisa. Wha ...
Waxaan u abuurnay hal farshaxan oo naxaas ah Kazakhstan sanadkii 2008, oo ay ku jiraan 6 qaybood oo ah 6m-sare General On Horseback, 1 xabbad oo 4m-sare ah Emperor, 1 cutub oo 6m-sare Giant Eagle, 1 cutub ah 5m-sare Logo, 4 qaybo ka mid ah Faraska 4m-sare, 4 gogo 'oo 5m dheer dheer, iyo 1 xabbo oo 30m-dherer ah Relievo expre ...
Konton guuradii ka soo wareegtay Faras Maarta ah oo soo saaraysa Gansu, Shiinaha
Bishii Sebtember 1969, farshaxan hore oo Shiineys ah, oo loo yaqaan 'Bronze Galloping Horse', ayaa laga helay Qabriga Leitai Tomb ee Bariga Han Han (25-220) ee Wuwei County, waqooyi-galbeed Shiinaha ee Gobolka Gansu. Sawir gacmeedka, oo sidoo kale loo yaqaan 'Faras Fardin Flop ah oo ku yaal Liqid Duula,